Kutema matombo Muchina Vagadziri & vanotengesa - China Dombo Kutema Muchina Fekitori
Bridge Kucheka Muchina
Muchina uyu unotora microcomputer yekudzvinyirira system uye yemunhu-muchina interface, inosanganisirwa ne Ultra-yakakwira chaiyo rotary encoder yekutsvaga uye infrared mudziyo, inoshandisa inverter kudzora kuruboshwe-kurudyi kudyisa, inogadzirisa kumhanya zvinoenderana nesimbi yedombo. Inoshandisa hydraulic kusimudza system, combinat ...
Inotakurika Bridge Kucheka Muchina
Muchina uyu unotora microcomputer yekudzvinyirira system uye yemunhu-muchina interface, inosanganisirwa ne Ultra-yakakwira chaiyo rotary encoder yekutsvaga uye infrared mudziyo, inoshandisa inverter kudzora kuruboshwe-kurudyi kudyisa, inogadzirisa kumhanya zvinoenderana nesimbi yedombo. Inoshandisa hydraulic kusimudza system, yakakwirira lif ...
Middle block bhiriji yekucheka muchina
Block Kucheka Machine
Muchina uyu unotora microcomputer control system uye yemunhu-muchina interface, inoshandisa inverter kudzora kuruboshwe-kurudyi kudyisa, inogadzirisa kumhanya zvinoenderana neyedombo zvinhu. Iyo inoshandisa hydraulic kusimudza system, mubatanidzwa we chrome-yakaifukidza giredhi pini uye kupfeka gwara gwenzi, ine diki gap, inopfeka, b ...
Manual Kutema Muchina
Muchina uyu unoshandisa chimiro chakasanganiswa; musoro mukuru unogona kutenderera madhigirii makumi masere neshanu uye uchifamba nemagetsi uchikwira nekudzika. Muchina wese une compact chimiro, kutaridzika kwakanaka, kugadzikana mashandiro uye yakakwira yekugadzirisa chaiyo, iyo inokodzera kumucheto kucheka uye yekugaya yemadiki slates, lath uye gobvu mataira.